Fanampiana hoan'ireo very asa :: Hahazo vola tsy haverina amin’ny Cnaps ireo mpiasa mpikambana • AoRaha
Fanampiana hoan’ireo very asa Hahazo vola tsy haverina amin’ny Cnaps ireo mpiasa mpikambana
Hanolotra fanampiana ara-tsosialy ho an’ireo mpiasa mpikambana ao aminy ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy na Cnaps. Ireo mpiasa natsahatra tanteraka tamin’ny asany noho ny Covid-19 no hisitraka an’io vola 175 000 ariary tsy haverina io. Nandritra ny fandalovan’ny minisitry Asa, ny fampananana asa, ny asam-panjakana ary ny Lalàna sosialy, Ranampy Gisèle, tany Tolagnaro, faritra Anosy, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, no nanambarany tamin’ ny fomba ofisialy ny fisian’ity fanampiana ara-bola ity.
« Ireo mpiasa nanaovan’ny mpampiasa azy fanambaràna fampitsaharana asa tanteraka tany amin’ny Cnaps teo anelanelan’ny voalohan’ny volana marsa sy ny 30 septambra 2020 ary nahavitana filazan-karama teo anivon’ny Cnaps tamin’ny telovolana faharoa sy fahatelo ary ny fahefatra ho an’ny taona 2019 raha ny telovolana voalohany kosa ho an’ny taona 2020 no hahazo ny fanampiana », araka ny fanazavana avy ao amin’ny Cnaps.
An-kilany, nahazoana antsipiriany indray ny tohana manokana ho an’ireo zokiolona mpandray fisotroandronono sy ireo mpandray vidin-takaitra ao amin’ity Tahirim-pirenena ity. Izay nandray latsaky ny 600 000 ariary kosa no hiantefan’io fanampiana indray mandeha io.
Napetraka toy izao ny fitsinjarana azy: hahazo 150 000 ariary ireo mpandray latsaky ny 400 000 ariary; 125 000 ariary no anjaran’ireo mpandray eo anelanelan’ny 400 000 hatramin’ny 500 000 ariary: ary 100 000 ariary kosa no homena an’izay mpandray 500 000 ka hatramin’ny 600 000 ariary.
Halefan’ny Cnaps miaraka amin’ny fisotroan-dronono sy ny vidin-takaitra avy hatrany ireo fanampiana ireo arakaraka ny fotoana izay handraisan’izy ireo izany. Tamin’ny volana oktobra lasa teo, na volana novambra na ny volana desambra 2020 ho avy izao, no hamoahana an’izao tohana ara-bola ho an’ny zokiolona izao.
Afaka manatona eny amin’ny biraon’ny Cnaps hatramin’ny 30 novambra ho avy izao ireo olona tokony hisitraka an’ireo fanampiana ireo na hiantso an’ireto laharana ireto: 034 42 833 33 na 032 03 833 33 na 033 90 833 33 na koa hisoratra anarana ao amin’ny tranonkalan’ny CNAPS www.cnaps.mg, espace travailleur.
Fitsarana raharaham-pifidianana :: Ben’ny tanàna dimy naongan’ny Filankevi-panjakana